Enhloko-dolobha, uhlala bakhona abangaphezu kwezigidi nambili. Leli qiniso kubangela kunendingeko enkulu khona izindawo yokungcwaba oshonile - amangcwaba. Enhloko-dolobha, eziningi kubo, futhi ezinye zazo zingabantu ezikhangayo esiyingqayizivele.
Omunye amathuna engxenyeni eseningizimu nesifunda eMoscow libizwa Scherbinsky. Lokhu kungenxa yokuthi edolobheni Shcherbinka itholakala eduze kwayo. Ephethe leli emathuneni inarha ebumbeneko Enterprise "Isiko", ophethe yokungcwaba izakhiwo eyinhloko-dolobha. Lokhu emathuneni, izici zayo futhi imodi wokusebenza anikezelwe lesi sihloko.
Sherbinskaya emathuneni welulela endaweni eningizimu Podolsky eMoscow esifundeni endaweni mayelana 90 amahektha. Ngakho, ke ingenye amangcwaba ngobukhulu enhloko-dolobha, nakuba hhayi ngomqondo yerekhodi. Shcherbinskaya yokungcwaba emathuneni lavulwa ngo-1982 futhi namanje kungathengwa sezwe insimu yalo.
Ukwakheka Scherbinsky emathuneni
Ikhipha eziyinkimbinkimbi eduze emathuneni Sherbinki ihlukaniswe yaba izingxenye ezimbili: eseningizimu nemaphakathi. Empeleni, Shcherbinskaya Central Amathuna iyona esemqoka, evulekile Eighties ekuseni eSoviet Union. Kodwa eNingizimu Amathuna, okuyinto manje ingxenye omngcwabo eziyinkimbinkimbi "Shcherbinskaya", kuwumphumela nokwanda kwalo ngo-1997. Inikeza uhla ezengeziwe 30 amahektha umhlaba. Zizonke, lezi zingxenye ezimbili ihlukene izindawo cishe ikhulu namashumi senzelwe nemingcwabo.
Amathempeli endaweni eyinkimbinkimbi emngcwabeni
Ngaphandle Shcherbinskaya ngcwaba emathuneni has sesonto lobu-Orthodox ku insimu yalo. Ukuze enembile, kuba indlwana anikezelwe zintathu Ongcwele, okuyinto engaphansi kwabefundisi besonto Zaharinskoy.
Land ngcono - elinye iphuzu elibalulekile, okuyinto ehlukile Shcherbinskaya emathuneni. Moscow kulesi sici - ngempela edolobheni impikiswano, okuyinto hhayi zonke izinto ngokuba ukunakekelwa lihle. Kulokhu, lo eziyinkimbinkimbi omngcwabo waba nenhlanhla - ukuthi landscaped kahle. Nemizi kunamagama bahlukana izindlela ngokwanele ububanzi embozwe yesimanje eliphezulu asphalt, basuke uhlinzekwa isimiso sokukhuculula ukuvimbela izindawo izikhukhula. Along avenue lemcoka emathuneni ujenga flowerbeds izimbali ezinhle nezithandekayo.
Ngezinye ekhoneni eyinkimbinkimbi ngalinye kukhona valve evumela amanzi ukusebenzisa ngokukhululekile. Zonke lezi Cranes ku Shcherbinskaya emathuneni kukhona 175. Ngaphezu kwalokho, eziyinkimbinkimbi ifakwe kweshumi amaphuzu ambalwa, eyenzelwe ukuqoqwa udoti.
ongakhetha Okungase kube amathuna
Ngokuphathelene ongakhetha onawo, bayingcosana. Kwesinye isenzakalo baba oshonile ku ebhokisini lokungcwaba enye - it is afakwe ebhokisini uthuli. Kulokhu, unikezwa ukukhetha - the urns yokungcwatshwa kwa phansi noma niche ezikhethekile endaweni evulekile columbarium, okuyilona elisebenzayo futhi itholakala ensimini ka Scherbinsky emathuneni. Ngaphezu kwalokho, izindawo ezintsha kungenzeka ukuthola umhlaba ngomkhaya amathuna yokhokho. Engxenyeni eseningizimu ye emathuneni kukhona usayizi esiqintini 1.2 amahektha, senzelwe nokulahla baseKorea kanye nabantu benkolo Buddhist. Futhi ensimini ka emathuneni kukhona umhlaba wemathando.
Nika amandla izihlobo ukuba banakekele amathuna, uwasuse bese efakwa ifomu efanele, emathuneni usebenza sokuqasha zonke impahla edingekayo. Ngakho, abahlala eMoscow akudingeki bawuthwale naye, okuyinto okunzima ngokungabi bikho imoto.
Amahora okuvula eyinkimbinkimbi emathuneni
Vakashela Shcherbinskaya emathuneni kungaba amahora yakhe umsebenzi olusemthethweni. Kusukela ekuqaleni kuka-Meyi kuze kube sekupheleni kuka-September, imodi eziyinkimbinkimbi simiswe ngalendlela lelandzelako: 9 ekuseni kuya ku-7 ntambama. Ngenkathi kusuka ekuqaleni kuka-October kuya ngasekupheleni kuka-Ephreli, ngesikhathi evakashele kuvinjelwe kusukela 9 ekuseni kuya ku-5 ntambama. Burial emathuneni akhiqizwa nsuku zonke kusuka ukuvulwa kuze 17:00 pm nsuku zonke, izinsuku eziyisikhombisa ngesonto.
Shcherbinskaya Amathuna (eMoscow): kanjani lapho
Ukuze uthole emathuneni Scherbinsky ezokuthutha zomphakathi, ungathatha ibhasi, isuka "South" metro station. Esikhathini kusuka 1 Okthoba kuya ekupheleni kuka-March, iqalisa kusuka 08:30 kuya ku 16:00. Kusukela ngo-Ephreli 1 kuya ekupheleni kuka-September, esimisweni ibhasi sandisiwe amahora amathathu kusihlwa, okungukuthi, kwaze kwaba ngehora lesikhombisa ntambama. Futhi imodi ngempelasonto futhi kuqala - 07:00 am.
Indlela ukuya emathuneni Scherbinsky ngemoto
Ukuze uthole emathuneni ku imoto yakho siqu, udinga ukuya Warsaw omkhulu bese edlulisa Ring Road bese ushayela 7.5 km kuya inkomba okuhambisanayo. Ngemva kwalokho kudingeka jikela ngakwesokudla bese iya ngqo. Ibanga Imininingwane kusuka MKADa ukuba Shcherbinsky emathuneni imayelana nanye amakhilomitha.
Izitatimende Russian mayelana isibindi: izaga kanye namazwi
Kanjani ukuyeka lesizalo ukopha? izindlela zokufunda
Siyini isifo sofuba amathambo? Kangakanani? Izimbangela Nezingozi Ukwelashwa
Ukuqala izinguquko kwezezimboni eRussia
Good ukwazi: indlela yokuphatha nail ingrown ekhaya